सुताइबाटै थाहा हुन्छ केटीले कस्ता केटा चाहन्छन् भनेर !
March 28, 2022 AdminLeaveaComment on सुताइबाटै थाहा हुन्छ केटीले कस्ता केटा चाहन्छन् भनेर !
खुट्टा फालेर सुत्नु : यस्तो सुतार्य सुत्ने केटीहरु लापरवाहि किसिमका हुने गर्दछन् । सासथै उनीहरुको सोचाई खुलला प्रक्रितिको समेत हुने गरेको छ । यस्ता केटीहरु निर्भिक स्वभावको हुने गरेका छन् । साथै आफ्नो जीवन साथी पनि निर्भिक होस् भन्ने चाहन्छन् । देब्रे कोल्टो परेर सुत्नु : यो सुताईको सवैभन्दा राम्रो पोजिसन मानिन्छ ।
यसरि सुत्ने केटीले जीवनमा टूलो किसिमको बदलावलाई स्किार गर्न गारो पर्दछ । यस्तो सुत्ने केटीहरुले नेतृत्वदायी केटा मन पराउछन् । हातलाइ तकिया बनाएर सुत्ने खालका केटिहरु सञ्चित गर्ने खालका हुन्छन् । उनीहरु जे कुरा पनि चाढै विस्वास गरिहाल्छन् । उनीहरुलाई राम्रो रुप रंग भएको केटा प्रति बढी आकर्षण हुने गर्दछ
रोल्पा पुगेका प्रचण्ड माथी जुत्ता प्रहार,भोट माग्न पुगेका प्रचण्ड चाेट खायर भागे,तुरुन्तै हेर्नुहोस
देवर बाबु स,ङ्ग को त्यो रात जब उस्ले म,लाइ…